ဆက်သွယ်ရေးသတင်း | ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
1800 MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ် သတ်မှတ်ချထားပေးမည့် အစီအစဉ်အား သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း
2600 MHz Auction Framework ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
2600 MHz Spectrum Auction သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
2600 MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်လေလံ (EoI) ပေးပို့သည့် ကုမ္ပဏီများ စာရင်းနှင့် Potential Bidder စာရင်းထုတ်ပြန်
ASEAN TELSOM-ATRC Leaders’ Retreat Meeting ကျင်းပ
Announcement of Successful Winner
Errata to the Addendum of the BIDDING DOCUMENT (SINGLE-STAGE)
Establishment of enabling environment for e-Government through Integrated Datacenters အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
IFB for Myanmar National Portal Project
IGW Facility Service Guideline ပမာဏမူကြမ်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
Joint Venture Formation and Tender Selection Work Committee Press Release
MOTC Web Protal လွှင့်တင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
Myanmar IT Infra-Network Expansion Project for FOC Backbone Network Construction
Myanmar e-Government Master Plan
MyanmarSat-1a ၏ C-Band နှင့် MyanmarSat-1b ၏ Ku-Band Transponder များ ငှားရမ်းနိုင်
National ICT Award 2013 အတွက် Educational Project Competition ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ တက်ရောက်
Postal Service Improvement သင်တန်း ဖွင့်လှစ်
Pre-Bid Conference for National Portal Project
Public Access Center (PAC) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင် နှုန်းထားများလျော့ပေါ့ခြင်း
Results of the Request for Proposal for Partnership with local Consortium willing to apply for Fourth Telecom Operator Licence
Telecommunication Operator တင်ဒါစိစစ် ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
e-government လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရေးညှိနှိုင်းစည်းဝေး
စင်္ကာပူ-မလေးရှား ရေအောက် ကေဘယ်လ် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်
စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ဆိုင်ရာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်လျာထားသတ်မှတ်ချက် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ဘာသာပြန်
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာန သို့Telenor Myanmar Limited နှင့် Ooredoo Myanmar Limited တို့မှ Licence Acceptance Letter ပေးအပ်ခြင်း
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်း အရှိန်မြှင့်တင်မှု (Third Wave) ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
ဖိုင်ဘာ ဆက်ကြောင်း ပြတ်တောက်၊ အင်တာနက် မြန်နှုန်း ကျဆင်း
မိဘပြည်သူတို့၏အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းဥပဒေများ
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း အား ကော်ပိုရေးရှင်း အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေး ဒုတိယဝန်ကြီးတက်ရောက်
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စာပို့ခများ ပြောင်းလည်းကောက်ခံမည့်ကိစ္စ
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အား ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အခြေခံ Computer သင်တန်း ဆင်းပွဲ ကျင်းပ
အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်း နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုခြင်း နည်းဥပဒေ
Request for Expression of Interest for Project Development Manager
Published: Feb 19 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received credit from the International Development Association towards the cost of Telecommunications Sector Reform Project, and it intends to hire Project Development Manager for Project implementation support.
Request for Expression of Interest for Project Execution and Monitoring Manager
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has received credit from the International Development Association towards the cost of Telecommunications Sector Reform Project, and it intends to hire Project Execution and Monitoring Manager for Project implementation support.
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန Authentication and Digital Signature Course ၏သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Published: Feb 13 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးသင်တန်းကျောင်းတွင် Government Data Network တည်ဆောက်၍ ဝန်ဆေင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အရေးပါသော
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်မှု၊ လူဦးရေလွှမ်းခြုံနိုင်မှု နှင့် ကွန်ရက်အရည်အသွေးများ တိုင်းတာနိုင်ရေး အစည်းအဝေးကျင်းပ
ပြီးခဲ့သည့်လိုင်စင်နှစ်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ၏ လိုင်စင်ပါကတိကဝတ်များနှင့်အညီ ပထဝီအနေအထားအရ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်မှု (Geographic Coverage)၊ လူဦးရေလွှမ်းခြုံနိုင်မှု (Population Coverage)နှင့် ကွန်ရက်အရည်အသွေး (Quality of Service) များ တိုင်းတာနိုင်ရေး အစည်းအဝေးအား (၆-၂-၂၀၁၉) ရက်နေ့ (၁၀:၀၀) အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂)အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
USF အစီအစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မရှင်းလင်း သည့် မေးခွန်းများအား ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ပြန်ကြားခြင်း
Published: Feb 05 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးအစီအစဉ် များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် (၉-၁၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲဖြင့် ပေးပို့ခဲ့သော တင်ဒါအဆိုပြုလွှာအား Operator များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ Introduction to Bidder (ITB) 9.2 အရ Addendum 1 to Request for Bids အား ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး(ITB ) 8.1 အရ Clarification of Bidding Documents Questions များအား ဖြေကြား​ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။